A na-emechi Alaeze COVID-19 na-akwụghị ụgwọ maka New Zealand
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » A na-emechi Alaeze COVID-19 na-akwụghị ụgwọ maka New Zealand
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Cook Islands na -agbasa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ ọhụrụ New Zealand • News • Iwughachi • Technology • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
onyoonyo gbara 2020 07 08 na 19 52 06
Alaeze nke Cook Island Prime Minister Henry Puna ekwupụtala Cook Islands "mpaghara mpaghara COVID-19 n'efu", agbanyeghị mpaghara ahụ dị na Code Yellow maka oge ahụ. Agbanyeghị na nje ahụ egosighi onwe ya, a rịọla mmadụ niile ka ha gaa n'ihu na-adị ọcha ma na-emega ahụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji gbochie mgbasa. Maka ozi ndị ọzọ gaa na www.covid19.gov.ck
Onye na-anya ụgbọ mmiri CookSafe na-achọpụta kọntaktị nke malitere na 19th June ga-eweta nghọta dị mkpa iji wusi usoro nyocha na kọntaktị kọntaktị Cook Islands COVID-19, ka Secretary nke Ahụike, Dr Josephine Aumea Herman na-ekwu. CookSafe ga-agbakwunye World Health Organisation mepụtara Go.Data sọftụwia ọrịa akụrụngwa nyocha maka ikpe na njikwa kọntaktị nke Te Marae Ora na-ebido n'izu na-abịa. Dr Herman kwuru, "Ihe dị anyị mkpa bụ ime ka ndị bi na ndị ọbịa anyị nwee nchekwa."
Ọ bụ ezie na COVID-19 bụ isi nke mbọ anyị, sistemụ ndị a ga-emetụta ihe egwu ahụike ọha na eze n'ọdịnihu gụnyere dengue. Nke a bụ ohere mmụta dị mkpa ka anyị na-amalite imeghe ụwa ọzọ.
Onye ọkwọ ụgbọ mmiri CookSafe bụ atụmatụ mmekọrịta dị n'etiti gọọmentị na Ngalaba Na-ahụ Maka Onwe Ha na Te Marae Ora na-eduga.
Na ntọala ókèala, rụọ ọrụ na okike 'mpaghara njem njem dị nchebe' n'etiti Cook Islands na New Zealand ka emeela n'ọtụtụ ọkwa n'ime ntọala abụọ n'ime izu ole na ole, na-arịba ama na-echebara echiche siri ike, ọtụtụ akụkụ ma rute n'akụkụ niile nke Gọọmentị. . Minista Brown kwuru,
“Ọ bụ ezigbo mkparịta ụka ya na Minister Peters na nkwenye na isi nke mkpa ahụike anyị yana ịchekwa uru mmeri siri ike New Zealand na Cook Islands mere na mbido ma na-agbasi mbọ ike iwepụ ma mebie mgbasa nke COVID- 19. Anyị kwenyere na ọ dị mkpa iji nọrọ na nche ma hụ na mgbochi mgbochi siri ike megide ihe egwu, gụnyere ntọala ókè, nyere nje ahụ na-aga n'ihu na-eto eto n'akụkụ ndị ọzọ n'ụwa. Otú ọ dị, n'otu oge ahụ, anyị kpebisiri ike ịnọgide na-ebute ọganihu nke ntọala ntọala ókèala n'etiti onwe anyị ebe anyị nyere ma anyị abanyela na obere oge site na COVID-19 na ntọala ókèala nke New Zealand na-enwe mmetụta dị mkpa na mmetụta na ọnọdụ Cook Islands, ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze na ọnọdụ akụ na ụba ya. ”
Minista Brown kwughachiri arịrịọ mbụ site na Cook Islands maka iwepụ ihe ndị chọrọ iche na mbata na New Zealand maka ndị njem si Cook Islands na izu ike nke ndụmọdụ ọhụụ njem ọhụụ nke New Zealand maka njem na Cook Islands. Minista Peters agwala ndị ọrụ ya ka ha nyochaa ikike iwepu ụbọchị iri na anọ nke nlekọta echekwara maka ụfọdụ ndị njem si Cook Islands ruo New Zealand dị ka ndị na-esonyere ndị ezinụlọ maka ndị na-ekwu maka ahụike; ndị òtù ikpe; ndị ọrụ ahụike na ndị ọrụ akụrụngwa dị oke egwu.
Ndị Cook Islands gosipụtara ọchịchọ ya ịhụ mbido mmalite nke ndị njem nleta si New Zealand, na-achọpụta na ntọala ókèala Cook Islands nwere ihe dị mkpa maka ụbọchị 30 tupu ebe obibi na New Zealand maka ịbanye na Cook Islands. “Anyị nwere ekele maka nkwado na nkwado nke New Zealand na Cook Islands kemgbe February na ntọala ókèala New Zealand ma anyị na-atụ anya ịnọgide na-arụkọ ọrụ na izu ndị na-abịanụ. Na mgbakwunye na ijide ihe dị mkpa nke ụbọchị 30, ebe obibi mbụ na New Zealand maka ịbanye na Cook Islands ruo opekata mpe Septemba, Cook Islands ga-aga n'ihu na-egbochi ịnweta ikuku na Cook Islands site na Auckland naanị ruo Disemba.
Anyị na-atụle imekwu nkwa ndị a dị oke mkpa iji chekwaa ma chekwaa ụdị njem njem na New Zealand. ” Ntọala oke na nkwado dị oke mkpa yana ọrụ nzaghachi na-aga n'ihu iji hụ na e guzobere ọkwa dị mkpa nke ntụkwasị obi na ntụkwasị obi na ntọala njikwa oke yana usoro ahụike ọha na eze site na nyocha na usoro nyocha, gụnyere usoro nyocha kọntaktị siri ike. Minista Peters kwuru na NZ na-aga n'ihu iji ọrụ ha dị oke mkpa iji belata ma belata imegide ihe iwebata iwebata COVID-19 na Pacific na Cook Islands. Mịnịsta Brown kwadoro echiche a, bụ onye kwupụtakwara na "Ọrụ a nke nlekọta dabere ma na Cook Islands na New Zealand. Ọ chọrọ ndị isi gọọmentị jiri nlezianya na nlezianya tụlee ihe ize ndụ niile metụtara na 'mpaghara njem njem nchekwa' nke mere na ọ dị mkpa mmekọrịta chiri anya na njirimara nkwado achọrọ iji wusi usoro anyị dị ugbu a